Ny biby tsy fahita indrindra eto amin'izao tontolo izao: toetra sy fahalianana | Green Renewable
Ny biby tsy fahita indrindra eto an-tany
Portillo Alemanina | 29/04/2021 09:06 | Tontolo_iainana
Tsy mitsahatra ny manaitra antsika ny natiora. Betsaka ny biby hafahafa manerana an'izao tontolo izao izay tsy dia matetika loatra ary mety hahagaga ny olona rehetra. Samy manana ny mampiavaka azy sy tsy fahita firy ny tsirairay. Na dia misy karazana tsy fahita firy an'arivony aza dia hanangona ny biby tsy fahita indrindra eto an-tany arakaraka ny mampiavaka azy sy ny fisiany natiora.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe iza amin'ireo biby tsy fahita indrindra eto an-tany, ny toeram-ponenany ary ny toetrany lehibe.
1 Ny biby tsy fahita indrindra eto an-tany
1.1 Trondro manjavozavo
1.2 Foza Yeti
1.3 Membracid Breziliana
1.4 Chlamydia Mpanjaka
1.5 Biby tsy fahita indrindra eto an-tany: mole orona kintana
1.6 Serfa rano sinoa
1.7 Biby fahita indrindra eto an-tany: axolotl
1.8 Sitrak'i vampira
Ny mason-tsivana amin'ny fisafidianana ireo biby tsy fahita indrindra eto an-tany dia ny faharetany sy ny habetsany amin'ny tontolo iainana. Mety ho tsara satria miseho fotsiny izy ireo amin'ny tontolo tontolo iainana hafahafa na amin'ny toe-javatra tsy manam-paharoa. Mety ho noho ny fisehoany misy ny mampiavaka azy manokana. Ny ankamaroan'izy ireo dia hita amin'ny endrika tsy fahita firy ary maro no ahiana ho lany tamingana. Andao hojerentsika hoe iza ny biby tsy fahita indrindra eto an-tany sy ny toetrany:
Fantatra amin'ny anarana hoe trondro mitete koa izy io ary voafidy ho biby ratsy indrindra eto an-tany taona vitsy lasa izay. Izy io dia biby izay miaina anaty lalina lalina ary ny nofony dia manana endrika toy ny jelly. Mahatonga izany rehefa alaina sary avy amin'ny ranomasina izy io rehefa voasambotra dia manana endrika toa jelly. Mampalahelo fa monina any izy io ary rehefa nanandrana nisambotra ireo hantsana ireo ny mpanjono dia naka trondro nilatsaka teny an-dalana izy ireo.
Izy ireo dia manana an'io karazana vatana io ho toy ny dingan'ny fampifanarahana ny fivoarana amin'ny tsindry sy ny mari-pana eo amin'ny ranomasina. Izany dia mahatonga azy ho tena gelatinous rehefa miakatra ambonin'ny vatana izy ireo.
Anisan'ireo biby tsy fahita indrindra eto an-tany hitantsika tamin'ny 2006. crustacea izay miaina any amin'ny halalin'ny ranomasina ary mahazo anaram-bosotra hoe manana landy ao amin'ny vatana izay onenan'ireo bakteria. Heverina fa a karazana symbiosis iraisan'ny samy olombelona izay amahanan'ny foza azy ireo tsikelikely ary manana trano izy ireo. Izy ireo dia ampiarahina amin'ny foza herititra, na dia nanapa-kevitra ny mpikaroka aza ny hamorona ny fianakaviany manokana hahafahany manasokajy an'io crustacea io arakaraka ny tsy fitovizany. Saika tsy misy angona azo avy amin'izany milaza fa mihabe ny fahita an'io biby io.
Izy io dia iray amin'ireo bibikely fahita indrindra izay misy ary an'ny genus Bocydium. Izy io dia karazana bibikely an'ny fianakaviana Membracidae ary Izy io dia manana karazany 14 nozaraina nanerana an'i Amerika Latina sy Afrika. Ity loha-bibikely ity dia manana loha manokana izay miendrika helikoptera. Na dia toa mandrahona aza izy io dia tsy mampaninona ny olombelona. Ny habeny dia tsy mahatratra antsasaky ny centimetatra ary ny ampahan'ireo voninahitr'izy ireo no fihinany.
Fantatra ihany koa amin'ny hoe androngo fringed ary karazana dinôzôro kely hita any New Guinea sy avaratry Aostralia ihany izy. Izy io dia biby iray izay nahasarika ny sain'ny maro satria manana membrane manodidina ny vozony izy ary mipoitra mba hanana endrika mandrahona kokoa ary ho fiarahana amin'ny vehivavy. Izy io dia manana fahaizana mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha ary manana fahaizana mihaza bibikely. Sahabo ho 90 santimetatra monja ny halavany.
Momba ny fihetsika dia miavaka amin'izany somary mamelatra ny fiarahan'izy ireo rehefa misioka sy mandihy manodidina ny vavy izy ireo.
Biby tsy fahita indrindra eto an-tany: mole orona kintana
Biby mifandraika amin'ny moka izy io, fa izy io no vondrona biby tsy dia fahita indrindra eto an-tany. Biby mampinono kely kokoa izay monina any Amerika Avaratra ary manana snout izay manana tentacles mavokely 22 finday. Izy io dia ampiasaina mba hisamborana ny hazany, indrindra ny bibikely sy moloka kely. Ny fisehoana dia vokatry ny fampifanarahana ny fivoarana amin'ny fiainany ambanin'ny tany. Noho io karazana fivoarana sy fampifanarahana io dia manana claws ary omena fahaizana sensory ambonimbony kokoa. Ary biby jamba tanteraka izy ireo.
Ireo mpahay siansa mandinika an'ity biby ity izay mahita fa afaka mamantatra ny fiasan'ny herinaratra azony haza izy ireo mba hisamborana azy ireo mihetsika haingana.
Serfa rano sinoa
Dia serfa izay manana volo ary manana zanatsoratra maromaro. Ny sakany dia manarona ny tapany ambany amin'ny Yangtze Basin eo anelanelan'i Sina sy Korea. Nampidirina tany Frantsa sy Angletera koa izy io. Izy ireo dia biby kely raha ampitahaintsika amin'ny vozon-tranonjaza hafa. Tsy manana tandindona koa izy ireo. Ny tena maha samy hafa azy amin'ny serfa iraisana dia ny fampandrosoana ny canine. Amin'ireo tany mandroso kokoa ireo dia afaka manadio tsara kokoa ireo renirano sy legioma izay ampahany amin'ny sakafony izy. Na dia namorona canine aza izy ireo dia manana sakafo mihinana zava-maniry.
Biby fahita indrindra eto an-tany: axolotl
Anisan'ireo biby tsy fahita indrindra eto an-tany isika manana ny axolotl, izay efa fantatra manerantany amin'ny alàlan'ny tamba-jotra sosialy. Amphibian Meksikana izy io ary atahorana ho lany tamingana. Ity toe-javatra manahirana ity dia vokatry ny fahalotoan'ny rano onenan'izy ireo. Izy ireo dia biby manana toetra tsy manam-paharoa izay neoteny. Midika izany fa ny olon-dehibe dia afaka mitazona ny toetra amam-panahy ananany rehefa endasina. Izy io dia manana fahaizana mitoetra ho toy ny mangatsiaka amin'ny fahatanorana mandrakizay.
Tsy misy hafa noho ny anarana, efa azonao an-tsaina sahady ny tsy fahita firy amin'ity biby ity. Izy io dia karazana cephalopod tsy fahita firy izay miaina anaty rano lalina. Araka ny efa hitantsika, dia misy biby hafahafa mivelatra amin'ny lalina. Ny mampiavaka an'io biby io sy tsy fahita firy dia ny fahaizany mihorona manodidina azy. Ny sosona hoditra izay mampifandray ireo tranony 8 mba hampisehoana endrika hafa amintsika.
Izy io dia manana taova fotofora afaka mamokatra hazavana ary afaka mahafehy tsara azy io. Tsy mampijaly olona izy ireo ary 30 sentimetatra fotsiny ny habeny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo biby tsy fahita indrindra eto an-tany ianao ary inona ny tena mampiavaka azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ny biby tsy fahita indrindra eto an-tany
Turbinin'ny rivotra mitsangana
Kitapo azo ampiasaina